Zvinhu zvitatu zvaunofanira kutora hongu kana hongu parwendo | Absolut Travel
Absolut Kufamba | 13/12/2021 11:59 | Yakagadziridzwa ku 15/12/2021 12:04 | vamwe
Ikozvino kuti mamiriro akakonzerwa nekuuya kwedenda anoita seanononoka kudzokera kune zvakajairikaVazhinji vedu tiri kuzvigadzirira, pazororo rinotevera, kutora rwendo ratinogona kubvisa kubva mukushushikana kwakanyanya uye kufunganya. Kuti tiite izvi, tinofanira kunyatsoronga nzira yevashanyi yekutevera nayo kuti tive nechokwadi chekupfuura nemu nzvimbo uye zvinokwezva vashanyi kwekuenda kwatichaenda.
1 3 zvinhu zvaunofanira kutakura musutukesi yako
1.1 Gadzirira zvakanaka zvipfeko zvauchapfeka
1.2 Usakanganwa zvemagetsi zvako
1.3 Ita vimbiso yehutsanana nezvigadzirwa zvehutsanana
3 zvinhu zvaunofanira kutakura musutukesi yako
Chimwe chatinofanira kufunga nezvacho zvinhu zvatinofanira kuenda nazvo parwendo rwedu. Kune gadziriro dzakawanda zvekuti, nguva zhinji, tinopedza kuremerwa uye kurongedza zvakaipa uye paminiti yekupedzisira. Kuti udzivise mamiriro ezvinhu emhando iyi, tichakunyora pazasi zvinhu zvitatu zvaunofanira kuenda nazvo kuti uende parwendo.
Gadzirira zvakanaka zvipfeko zvauchapfeka
Kunyange zvazvo zviri pachena, tinofanira kuva nazvo Mbatya dzakakodzera kuti tiende zvakanaka sezvinobvira kunzvimbo yedu yevashanyi. Kupfuura zvipfeko zvemukati zvatichapfeka, isu tinofanirwa kuchinjisa sarudzo dzedu kumamiriro ekunze atinozowana ikoko: kana ukamirira. kutsika kwakadzika, gadzirira magirovhosi, ngowani, machira uye sweatshirts; pane zvinopesana, kana iwe ukamirira kupisa chaiko parwendo rwako, zvishongedze zvikabudura, hembe uye tsamba sleeve t-shirts. Kana paine mahombekombe padyo, usakanganwa swimsuit yako!
Kufambisa kusarudzwa kwembatya dzekutakura musutukesi yako, tinokurudzira kuti usarudze zvipfeko seti kuti iwe unogona kushandisa uye kusiyanisa pamazuva ekugara kwako. Kana kugara kwakareba, enda zvakanaka wakatakura T-shirts, bhurugwa uye shangu dzemarudzi ese.
Usakanganwa zvemagetsi zvako
Kufambira mberi kwehunyanzvi zvakabuda mumakore achangopfuura zvakapa kuti pave nezviuru zvemichina yemagetsi inobatsira zvikuru. Bypassing the smartphone uye kune charger yayo, isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti tinotakura musutukesi yedu kamera, laptop yedu uye bhatiri rekunze ratinochaja naro zvishandiso zvedu kana bhatiri rikapera.
Pakutakura midziyo iyi, ichave yakakosha varongedze zvakanyanya sezvinobvira kudzivirira kukuvara panguva yekufambisa. Kuti uite izvi, edza kuvatakura mubhegi rako rekutakura kana mubhegi rakasiyana kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwavo. Kana uchinzwa uchisungirwa kuitakura musutukesi yako, iva nechokwadi chekuisa mukati nzvimbo yepakati pekutakura zvinhu.
Ita vimbiso yehutsanana nezvigadzirwa zvehutsanana
Zvingangodaro, paunosvika kunzvimbo yako yevashanyi, unenge uchigara mu hotera iyo inopa vatengi vayo marudzi ese e zvinhu zvekuchenesa. Nekudaro, kana iwe usingazive nechokwadi kuti zvii zvichange zviri maturusi aya achasanganisira pekugara, kana iwe uchiziva asi zvimwe zvakakosha zvisipo, uchafanirwa kutora Makeup bhegi nemukwende wakakodzera: bhurasho remazino, deodorant, moisturizer, wipes, sipo ... zvichingodaro.
Sezvo vari zvigadzirwa kuvimbisa hutsanana kubva mumativi akasiyana-siyana omuviri wedu, tinofanira kuva nechokwadi chokuti akakwana yakachengetwa zvakanaka kuitira kuti vasasvibiswa. Panyaya yemagaba echigadzirwa, hazvizove zvakafanira, asi ungangoda kutakura iwo mumabhegi akaparadzana kuti adzivise kubata. tsvina uye unyoro.
Kunyangwe isiri chikamu chemukwende, chimwe chezvigadzirwa chaunofanirwa kuve wakadzikama kana uchienda parwendo chakanaka. imba inishuwarenzi Izvo chengetedza zvinhu zvako pakubirwa uye zvimwe zviitiko panguva yako yezororo. Rangarira kubvunza maonero nezve iripo porisi inopihwa, zvakare kuenzanisa mitengo uye yekuvhara yekusarudza, nekudaro, iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » 3 zvinhu zvaunofanira kutora hongu kana hongu parwendo